YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, April 27
Myanmar removes CNN reporterUploaded by CNN_International. - News videos from around the world.
MSWORK FILE HERE27 April 2010 Yeyintnge Diary Summary only...
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း ၂၇/ ဧပြီ ၂၀၁၀ နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ တွက်ခဲ့ကြ၊ တွက်ထားကြသူတွေ မနည်းပါဘူး။ အခုတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ မြန်လည်းမြန်၊ ပုံသဏ္ဌာန်တွေလည်း စုံ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ နအဖဟာ နယ်စပ်တွေကို ဖိအားပေးနေတုန်း ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဗုံးတွေကွဲပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရှေ့ဖျားဆုံး တရုတ်-မြန်မာ၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွေကို တပ်တွေပို့နေတုန်း အနောက်ဖျားက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဗုံးတွေကွဲပြန်ပါတယ်။ ဒီဗုံးကွဲမှုတွေရဲ့ အနှံ့အပြားဖြစ်မှုနဲ့ အရေအတွက်ဟာ သိပ်ထူးခြားနေပါတယ်။ အချိန် ကာလအရပြောရရင်လည်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးရဲ့ တကယ့်အကွေ့အချိုးကာလ၊ အရေးကြီးကာလဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ထူးခြားတာတချက်က ဘယ်မှာမှ လက်သည်မပေါ်၊ သဲလွန်စလေးတောင်မှ မရတာပါ။ နအဖရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မျိုးစုံတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အလုပ်ရှုပ်နေကြလို့လား၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအပေါ် ဆင်နွှဲတော့မယ့် နောက်ဆုံးနှိပ်ကွပ်ပွဲကြီးအတွက် အသားကုန်လုံးပန်းနေကြလို့လား။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် နအဖအစိုးရ အုပ်စိုးမှုယန္တရားရဲ့ ယိုပေါက် ဟာကွက်တွေကို အထင်အရှားမြင်တွေ့နေရတာကတော့အမှန်ပါပဲ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအမီ နအဖကို အပြတ်ဖားနေကြရတဲ့ “ဆောင်းပါးရှင်” ဆိုသူတွေမှာတော့ ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူ့ဘယ်လို တွယ်ရမယ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီး အသားလွတ် ရမ်းသမ်းချနေရတဲ့အခြေအနေ ဆိုက်နေပါတယ်။ တချို့ကတော့လည်း “သူခိုးလိမ္မာမျက်နှာကြီးမို့” လက်သည်မပေါ်တာ၊ ရဲတွေက တက်တက်ကြွကြွ မရှာဖွေတာလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမို့ ဒါလည်း စဉ်းစားစရာအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နအဖကို ဆန့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချင်းချင်းတွယ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်သေကျေစေတဲ့အထိ ဖြစ်တာကတော့ မကောင်းတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါမျိုးကို တော်လှန်ရေးမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ အားမပေးသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရက်စက်ရှည်ကြာတဲ့ အုပ်စိုးမှုတခုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုတော့ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ အမျိုးသားတော်လှန်ရေး၊ လူတန်းစားတော်လှန်ရေး စတာတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် အစပိုင်းမှာ ဒီလိုပဲ တဦးချင်းစွန့်စား လုပ်ကြတဲ့၊ မဆိုင်သူတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပေါ်လာလေ့ရှိကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ အယူအဆ မကြည်လင်တာကြောင့်မို့ မင်းလောင်းပုံစံနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ထ’ချကြတာကို မြန်မာပြည်ရဲ့ မဝေးလှတဲ့ သမိုင်းမှာ လှမ်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးလက်တွေမှာ ဓားပြဂိုဏ်းလိုလို၊ သူပုန်အဖွဲ့လိုလိုဆိုတာတွေကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ မြန်မာပြည်က ‘ရော်ဘင်ဟု’ တွေဟာ ခေတ်မီနိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် မတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ လယ်သမား သူပုန်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှာ လွန်ကျွံတယ်လို့ ထင်မြင်စရာရှိတာ၊ မဆိုင်သူကို ထိခိုက်တာတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအားနည်းသေးလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှနိုင်ငံမှာ ဘော်ရှီဗစ်တွေရဲ့ တော်လှန်ရေးမတိုင်မီ အနားခစ္စလို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ကြံရေးဂိုဏ်းက အရင်ပေါ်လာတာပါ။ လီနင်ရဲ့အစ်ကိုကိုယ်တိုင် အဲဒီအထဲမှာပါခဲ့ပြီး ဖမ်းမိလို့ ကွပ်မျက်တာလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းမှာကိုပဲ နဂါးနက်ဂိုဏ်းဆိုတာ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဂိုဏ်းဟာ ပေါ်ကာစတုန်းက လုပ်ကြံရေးဂိုဏ်းတမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဂိုဏ်းသားတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ တော်လှန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အသိတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်မိတော့ ရာသက်ပန်တော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်လာပြီး တော်လှန်ရေးထဲမှာပဲ ကျဆုံးသွားကြပါတယ်။ အလားတူပဲ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ထဲကို ပြောင်းလဲပါဝင်လာကြတဲ့ ဓားပြတွေ၊ ‘ရော်ဘင်ဟု’ တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လို တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးက အောက်ဆုံးရောက်နေ၊ ကြံ့ဖွံ့လို နအဖရဲ့ လူမိုက်တွေက နေရာတကာမှာ ရမ်းကားအနိုင်ကျင့်နေ၊ ဒီကြားထဲမှာ နအဖရဲ့ ဒီမိုကရေစီကြောင့် မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်တွေကို ဖြန့်ချိခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ နည်းမျိုးပေါင်းစုံသော ဆန့်ကျင်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ သဘာဝကျတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ဒီလိုနာကြည်းပေါက်ကွဲမှုတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ရောက်အောင် တည့်မတ်ပေးဖို့ဟာ အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို အထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ သူတို့လုပ်တဲ့နည်းဟာ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေ နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ ထောက်ပြရပါမယ်။ နအဖကို ရွံမုန်းနာကြည်းတယ်၊ ဖြုတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့ သာမန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းလောက်နဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်ကို လူထုဆီ ပို့ဖို့ဆိုတာဟာ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့မှာ မလွယ်လှပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်တဲ့ ကျေးလက်လူထုဆီကို ပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က ဒီအရေးတော်ပုံမှာ လယ်သမားတွေပါလာဖို့ဟာ အင်မတန်မှ အခရာကျပါတယ်။ သူတို့ပါလာမှ ပွဲက ပြတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့အခြေအနေမှာ လယ်သမားတွေကို စည်းရုံးဖို့ဆိုတာ တယ်လွယ်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဆီကို ကားစီးသွား ပြောချင်တာပြော၊ တောထမင်း တောဟင်းစားပြီး ပြန်လာရုံနဲ့ မရပါဘူး။ အချိန်ယူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ် ပါတယ်။ သူတို့အကြားမှာ အကြာကြီးနေလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရအဖတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့တွေမသိအောင် ဘယ်လို ၀ပ်မလဲ စတဲ့လက်တွေ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရပါမယ်။ မြို့ပြနဲ့ ကျေးလက်ပေါင်းစည်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲ စဉ်းစာအဖြေရှာကြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် တိုက်ပွဲခွင်လည်းကျယ်လာ၊ နည်းသဏ္ဌာန်တွေလည်းစုံလာ၊ လူထုထောက်ခံမှုလည်း ပိုရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လယ်သမားသားသမီးအများစုဖြစ်တဲ့ သံဃာတွေ၊ စစ်သားတွေရဲ့အသည်းနှလုံးကိုလည်း ဖမ်းစားနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။http://www.khitpyaing.org/articles/2010/April/27410.php
NEJ / ၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၀ တရားမျှတမှုမရှိ၊ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသည့် နအဖစစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီက လုံးဝလက်မခံဘဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်လိုက်သည့်အတွက် ရှေ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအလားအလာ အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်လင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။ မေး။ ။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ် ထောက်ခံချီးမွမ်းသူများ ရှိသလို လက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကို မတွက်တတ်ဘူးလို့ ယူဆပြောဆိုသံတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဆရာ့သဘောထားအမြင် ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ အန်အယ်လ်ဒီ ဘာကြောင့် မှတ်ပုံမတင်သလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်သလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စကို သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် အဓိက အချက်ကတော့ ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၀၈ နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နေလို့ပဲ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ထွက်လာမယ့် ရလဒ်တွေဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်တို့၊ အစိုးရအဖွဲ့တို့ဆိုတာလည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်နေတယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရက လက်ရှိ စစ်အစိုးရရဲ့ အာဏာရှင်ပုံစံ အုပ်စိုးမှုကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရေးဖြစ်တယ်။ ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းတို့ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုခြင်းတို့၊ နောက် တိုင်းပြည်နဲ့လူထု ဆင်းရဲမွဲတေ ငတ်ပြတ်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ စစ်အာဏာ တည်မြဲရေးကိုသာ သက်ဆိုးရှည်စေမယ့် အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်။ မြင်လွယ်ထင်လွယ်အောင်ပြောရရင် ဧည့်စာရင်းစစ်တာ၊ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးတာတွေ ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲ။ တရားစီရင်ရေးက စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်လက်ဝေခံတွေ လက်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲ။ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ် သယံဇာတတွေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်း သူတို့ပဲ လက်ဝါးကြီး ဆက်အုပ်ထားမှာပဲ။ ဒီအခြေခံဥပဒေကို အန်အယ်လ်ဒီက လက်မခံနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် အရေးပါတဲ့ အကြောင်းတရပ် ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပဲ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း ဒီစစ်တပ်ကပဲ ကျင်းပခဲ့တာပဲ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို တနည်းနည်းနဲ့တော့ ဂုဏ်ပြုရမှာပဲ။ အခုတော့ ဂုဏ်မပြုရုံမက အမှိုက်လုပ်ပစ်တယ်။ ဒါကို ကလေးကစားသလို တန်ဖိုးမဲ့ လုပ်ပစ်တာဟာ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးကို စော်ကားတာပဲ။ ဒါနဲ့အားမရသေးဘူး။ လူထုဆန္ဒမပါဘဲ အဓမ္မအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို သစ္စာခံရဦးမယ်လို့ ဇွတ် ကျွန်ဇာတ်သွင်းပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘဲ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို အန်အယ်လ်ဒီက လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာ ပြည်သူတွေ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆန္ဒဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ အန်အယ်လ်ဒီ “နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်” မတွက်တတ်ဘူးလို့ ပြောနေသူတွေကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ပြောနေတဲ့ “နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်” ဆိုတာ ပြည်သူလူထု အတွက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ အချောင်သမား ‘ငို့ဘ’ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ အရိုးအရင်း “နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်” ကို ဆိုလိုတာလား။ တကယ်တော့ အန်အယ်လ်ဒီက နှောင်ကြိုးမဲ့ လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ “နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်” ကို ပြည်သူတရပ်လုံး ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ တိုက်ပွဲနည်းဗျူဟာ ပြောင်းလိုက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ မေး။ ။ တကယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီ ဖျက်သိမ်းခံရရင် အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အာဏာရှင်မဟုတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရများ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်အားထုတ်ခဲ့တာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီဟာ ကမ္ဘာမှာ အရက်စက် အကြမ်းကြုတ်ဆုံး၊ အမြော်အမြင်အမဲ့ဆုံး စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် ကြိုးပမ်းသမျှ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီက သူ့အားနည်းချက်ကို ကိုယ်တိုင် လူထုထံ ၀န်ခံပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရရဲ့ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆန် လိုက်တာဟာ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ လူထုကလွှဲအပ်ထားတဲ့ အရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲအလံကို သစ္စာရှိရှိ ဆက်လက်လွှင့်ထူလိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်က ခြိမ်းခြောက်ရုံနဲ့ အညံ့ခံ ဒူးထောက်သွားမှာ မဟုတ်ဆိုတာ ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်။ အရေးတော်ပုံအလံ မလှဲသမျှ တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေမယ်။ လူထုဆန္ဒကို အခြေခံထားတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်မူဝါဒလည်း ဆက်လက် ရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီဟာ လူထုတိုက်ပွဲထဲက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ လူထုပါတီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာစည်းဘောင်ထဲမှာ မှတ်ပုံမတင်ရုံနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ အန်အယ်လ်ဒီကို တရားမ၀င်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေညာလာနိုင်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်တော့ဘူးလို့ အန်အယ်လ်ဒီက မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက် ကတည်းက ပါတီကို စစ်အာဏာပိုင်တို့ ဖျက်သိမ်းခိုင်းမယ့်အရေး တွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တိုက်ပွဲနည်းဗျူဟာ ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီက လူထုနဲ့ ပိုပြီး နီးနီးကပ်ကပ် လက်တွဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဟန်ပြောင်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုထဲကို စိမ့်ဝင်၊ လူထုနဲ့ ကျောချင်းကပ်ပြီး နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေ ရရှိရေးတို့အတွက် တိုက်ပွဲရေချိန်မြှင့်ဖို့ ရှေ့တလှမ်းတိုးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နအဖ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ရက် (၆၀) ပြည့်ချိန်မှာ ပါတီအလံနဲ့ဆိုင်းဘုတ် ချပေးစရာမလိုဘူးလို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၂၁) က (လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာ စုဝေးနိုင်ခွင့်နှင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်တို့ရှိသည်) လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လူထုထောက်ခံမှု ရရှိထားတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကို အဓမ္မဖျက်ဖို့လုပ်လာရင် အန်အယ်လ်ဒီကလည်း Civil Disobedience မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာဖည်ဆန်ရေးကို မလွှဲမရှောင်သာ စတင်ရဖွယ်ရှိပါတယ်။ မေး။ ။ အတိုက်အခံပါတီကြီးတရပ်အနေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရပ်တည်မှု မရှိတော့အတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူလူထုကို ဦးဆောင်နိုင်မယ့် အနေအထား ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံ မတင်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက်တာဟာ အများထင်နေကြသလို ပါတီဖျက်သိမ်းလိုက်တာမဟုတ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီ မရှိတော့ဘူးလို့ မယူဆသင့်ပါဘူး။ နာဂစ်ဒေသမှာ ရေတွင်းရေကန်တူးပေးတဲ့ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းမျိုးတွေ၊ HIV/AIDS ကိစ္စလို လူမှုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်သလို တဘက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအရ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ မူနဲ့အညီ ဆက်လက်ရပ်တည်နေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရှေ့နေကတဆင့် ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီသဘောထားကို ထောက်ရင် အန်အယ်လ်ဒီဟာ လူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ရင်း စုဖွဲ့မှုမပျက်အောင် စည်းရုံးရေးကို ဆက်ထိန်းထားမှာဖြစ်တယ်။ အတိုက်အခံအင်အားစုတရပ်အနေနဲ့လည်း တိုက်ပွဲထဲမှာ ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လူထုကို အသိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုက အန်အယ်လ်ဒီကို နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့များ၊ ပြည်သူများက ဆက်လက် ထောက်ခံအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီမပါရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို နအဖအနေနဲ့ ထည့်မတွက်လို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်မှောက်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုအခန်းကဏ္ဍမှာ အန်အယ်လ်ဒီဟာ အရေးပါမြဲ ပါနေဆဲပါပဲ။ မေး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်လို့ အန်အယ်လ်ဒီက ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုရမယ်ဆိုရင် ဒီလူထုထောက်ခံမှုနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ အခုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ တစုံတရာ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက် ရှိနိုင်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်၊ အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကို မချမီ၊ အောက်ခြေလူထုထဲမှာ သဘောထားဆန္ဒကောက်ခံမှုတခု လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအချက်ကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လူထုအသံကို နာခံပြီးမှ ပေါ်ထွက်လာတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်သတိပြုသင့်တဲ့အချက်က ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ရေစီးအတိုင်း ရေသာခို မျှောလိုက်သွားတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ရေရှည်အမြင်နဲ့ ရေဆန်ကို ဆန်တက်လိုက်တာပါ။ လက်ရှိ စစ်အာဏာအောက်မှာ လူထုဟာ ဘယ်ခေတ်နဲ့မှမတူအောင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ အခြေခံ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းလွန်းမှု၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးအပါအ၀င် အဖက်ဖက်မှာ ချွတ်ခြုံကျမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားနေရပါတယ်။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ အညှိုးနွမ်းဆုံးခေတ်ကာလပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူထုအနေနဲ့ ဒီ စစ်အာဏာတရားဝင်ရေး ရွေးကောက်ပွဲဟာ သူတို့အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိနိုင်ဘူး၊ စစ်ကျွန်ဖြစ်ဖို့ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ သိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူထုအများစုက အန်အယ်လ်ဒီကို စစ်ကျွန်အဖြစ် မခံရေး သဘောထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အချုပ်ပြောရရင် အန်အယ်လ်ဒီနောက်မှာ လူထုထောက်ခံမှု ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ နအဖဟာ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သူ့စိတ်တိုင်းကျ စီမံနိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲ အခင်းအကျင်းကို အရေးပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုက မလိုလားတာ ထင်ရှားတဲ့အတွက် မျှော်လင့်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မေး။ ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီမပါဘဲ စစ်တပ်ကရေးဆွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်ပါသလဲ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲအကျိုးဆက်က ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံလူထုပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာလည်း ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာ ပြည်သူတွေ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မူလ အမျိုးသားညီလာခံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ အန်အယ်လ်ဒီပါမှ ဒီဥပဒေအသက်ဝင်မယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖ က နိုင်ငံတကာဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သွေဖည်ပြီး တဖက်သတ် ဥပဒေရေးဆွဲခဲ့တယ်။ အခုထိ ဒီ အထမမြောက်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆက်လုပ်ဖို့ အားထုတ်နေတယ်။ အတိုက်အခံပါတီတွေဖြစ်တဲ့ NLD, SNLD, ALD, MNDF, ZNC စတဲ့ ပါတီတွေကို တမင်ဖယ်ထုတ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အပြင်၊ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်ဟန့်တားထားတယ်။ ဒါတွေဟာ နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်တွေပါပဲ။ ခြုံငုံပြောရရင် ဒီအားနည်းချက်တွေကြောင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးဆက်အဖြစ် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်ဖို့ သေချာတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်အသစ်တခု ထပ်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာတွေ မြင်နေရတယ်။ မေး။ ။ အခု ပြည်သူ့အခွင့်အာဏာ ရရှိထားတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ မပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေ မဲပေးသင့်၊ မသင့် သိပါရစေ။ ဖြေ။ ။ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံလူထုပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာလည်း ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲဆန္ဒ Mandate ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေအရ ‘ဥပဒေပြုလွှတ်တော်’ မှာ ကိုယ်စားလှယ်နေရာအားလုံးကို လူထုအများစု ဆန္ဒမဲနဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအာဏာပိုင် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိုင်ငံသားများရဲ့ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဲအရေအတွက် ပြည့်မီတဲ့ အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေကို သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ Mandate အပ်နှင်းရမယ်လို့ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ သူတို့အခွင့်အာဏာ Mandate သုံးခွင့်မရအောင် စစ်တပ်က လက်နက်နဲ့တားခဲ့တယ်။ ဒီအစဉ်အလာဆိုးကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ လက်မခံသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၉၀ လူထု Mandate ကို တနည်းနည်းနဲ့ ကျင့်သုံးနိုင်အောင် လူထုက တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒီ Mandate ပြဿနာ မဖြေရှင်းဘဲ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးသင့်ပါဘူး။ မေး။ ။ အရေးတော်ပုံပါတီဖြစ်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကတော့ ပါတီမရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့တသားတည်း ရပ်တည်ဖို့ ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့။ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်ကရော ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ လူထုက စစ်အစိုးရကို စိတ်ကုန်နေကြတယ်။ စစ်အစိုးရလုပ်သမျှ အယုံအကြည်မရှိကြဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရ မတော်မတရားလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီဝင်မပြိုင်တာကို လူထုက ထောက်ခံကြတယ်။ ဒီအချက်ကို အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ အလေးအနက်ထားရမယ်ထင်တယ်။ အခွင့်အခါကြုံတိုင်း လူထုက အန်အယ်လ်ဒီကို မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီက ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်။ မကြာခင်ပေါ်လာမယ့် အခြေအနေတွေ အောက်မှာ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်မှုရှိရှိ အခွင့်အလမ်းကိုသုံးဖို့လိုမယ်။ ကြားသိရသလောက်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီဟာ လူမှုအထောက်အကူလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင်း တပြိုင်နက်မှာ လူထုအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေရမှုတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အားထုတ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာလူထုရဲ့လက်ရှိအနေအထားက စားဝတ်နေရေး ဆိုးသွမ်းသံသရာမှာ လည်နေကြရတာကြောင့် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ တချို့သုံးသပ်ချက်တွေ ကြားရတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာ နိုင်ငံပြင်ပက ရေဒီယိုသတင်းတွေကို လူထုပိုစိတ်ဝင်စား နားစွင့်လာကြတာကို ထောက်ရင် ဒီသုံးသပ်ချက် မမှန်ဘူးဆိုရမယ်။ လူထုဟာ ဆင်းရဲတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးကို အမြဲတော့ စိတ်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်တိုင်း လူထုဟာ တာဝန်ကျေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကနေ လူထုကို ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုး အခါမပေးသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အကြံပေးတဲ့သဘောမျိုး ပြောရရင်တော့ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ ကျင့်ဝတ်များအရ နိုင်ငံရေးပါတီများ တည်ထောင်ခွင့်ကို အာဏာပိုင်အဖွဲ့များက လေးစားအသိအမှတ်ပြုရမယ်၊ ပါတီအားလုံးကို ဥပဒေ ရှေ့မှောက်မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးများပေး ယှဉ်ပြိုင်စေရမယ်။ အာဏာပိုင်များက ပါတီအားလုံးကို မခွဲမခြား တန်းတူ ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာ အတိုက်အခံပါတီတွေဖြစ်တဲ့ NLD, SNLD, ALD, MNDF, ZNC စတဲ့ ပါတီတွေဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရပါတယ်။ ဒါကို လူထုသဘောပေါက်အောင် အန်အယ်လ်ဒီက လူထုအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ လူထုက နားလည်သဘောပေါက်ရင် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မေး။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရက စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဒီကြားထဲက ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရ မရှိဘူးလို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတွေဟာ အလွန်တာဝန်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ သတင်းယူရ ရေးရမှာ ဖြစ်ရုံမက၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုယ်စားပြုပါတီလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှာဆိုတော့ မဲလိမ်မှု မဲမသမာမှုတွေ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်လာဖို့ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ နောက်တချက်က နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် အကဲခတ်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များကိုလည်း ခွင့်ပြုမယ့်အလားအလာ အလွန်နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတွေကိုသာ ပြည်သူလူထု အဓိက အားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေ (၃) ရပ်ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေပါ။ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ကျင်းပတာ ဟုတ် မဟုတ် သိနိုင်ဖို့ကိစ္စမှာ သတင်းမီဒီယာသမားများဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်နေဖို့လိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီမှာ မီဒီယာက လူထုကို သတင်းအချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးဖို့လိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအကြောင်း၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြောင်း၊ ပါတီမူဝါဒတွေ၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နောက်ခံ ကိုယ်ရေးသမိုင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့သီးခြားပြောဆိုတဲ့ အမြင်အယူအဆတွေ စသဖြင့် လူထုစဉ်းစားချိန်ဆနိုင်ဖို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးနိုင်အောင် မီဒီယာက လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အကြောင်းလည်း လူထုသိအောင် သတင်းပေးရပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင် ဟုတ်မဟုတ်၊ ကော်မရှင်နောက်ကွယ်မှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စွက်ဖက်မှုရှိ မရှိ၊ မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်စာရင်း ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းတွေ စနစ်တကျပြုစုဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ မရှိ၊ အဂတိလိုက်စားပြီး ပါတီတခု လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို မျက်နှာသာပေးမှု ရှိ မရှိ၊ ကော်မရှင်ဝန်ထမ်းတွေ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိ မရှိ၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ အချိန်မီ အလုံအလောက် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ စတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း မီဒီယာကပဲ စောင့်ကြည့် သတင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့ မဲစတင်မပေးမီ မဲပုံးတွေ အလွတ်ဖြစ်နေရဲ့လား၊ မဲရုံထားရှိမှု စနစ်ကျရဲ့လား၊ မဲစာရွက် အလုံအလောက်ရှိရဲ့လား၊ မဲရုံတာဝန်ကျ ပုဂ္ဂိုလ်များ တာဝန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ရဲ့လား၊ မဲရုံပတ်ဝန်းကျင်မှာ မဲဆွယ်မှု၊ မဲဝယ်မှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ နှောက်ယှက်မှု ရှိ မရှိ စတာတွေကို မီဒီယာက စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ မဲရေတွက်ချိန်မှာ စည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့အညီ မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ရေတွက်မှု လုပ် မလုပ် မီဒီယာက စောင့်ကြည့် သတင်းပေးသင့်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက် ကိစ္စတွေကတော့ ပါတီတွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနိုင်အရှုံးစာရင်း ကြေညာတဲ့သတင်း၊ လွှတ်တော် ဘယ်တော့ခေါ်မယ်၊ အစိုးရ ဘယ်တော့ဖွဲ့မယ် ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေ လူထုကို ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတွေ မိမိရရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ စစ်တပ်က အာဏာဆက်ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် မသမာမှုမျိုးစုံ လုပ်လာမယ့် အလားအလာတွေ မြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှု၊ အာဏာအလွဲသုံးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်မှု၊ မဲလိမ် မဲခိုးမှု အစရှိတာတွေ မလွဲမသွေ ဖြစ်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီသမိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက အမိအရ မှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင် လုပ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသတင်းအများစုကို ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေ၊ ပြည်တွင်းအင်တာနက်သတင်း စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တင်ပြခွင့်ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ၊ နိုင်ငံတကာသတင်း အေဂျင်စီတွေနဲ့ စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာကို သတင်းပေးနိုင်အောင် အထူးဝါယမ စိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီ လွတ်လပ်မှုမရှိ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းအမှန်ကို ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာသမားတွေက ပြည်သူကို ပြောပြရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ မေး။ ။ စစ်အုပ်စုက ပြည်တွင်းအခြေနေတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ဟန်ပြလုပ်ပေးပြီး ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအရ သူတို့ပဲ အာဏာရနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါဦးမလား။ ဆရာဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက နိုင်ငံတကာဖိအား ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ဆန္ဒ စတာတွေကို ဂရုမမူဘဲ၊ သူအာဏာ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေလုပ်ခဲ့တာ၊ တိုင်းသိပြည်သိ ကမ္ဘာသိပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သဘောထားကို ဥပမာပြု ပြောချင်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီဥပဒေတွေဟာ အန်အယ်လ်ဒီအတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုလို့ တုံ့ပြန်လိုက်တာ မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့် ဒေါ်စုက စိတ်မပျက်တဲ့အပြင် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အား အသစ်တောင် ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း စိတ်မပျက်ဘဲ၊ ဒေါ်စုနဲ့အတူ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေဆဲလို့ မြင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအများစုကြီးဟာ ရက်စက်ယုတ်မာလွန်းတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ မနေချင်တော့တာ ရာနှုန်းပြည့်သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်အားအသစ်မွေးပြီး စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဆက်လက် အန်တုကြဦးမှာလည်း သေချာပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ မတရားမှု ဖိနှိပ်မှုရှိနေသမျှ လူထုကအုံကြွအန်တုနေမှာပဲ။ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကလည်း လူထုဘက်မှာ ဒီမိုကရေစီဘက်မှာရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ မကြာခင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။http://www.khitpyaing.org/
ဘယ်လမ်းလိုက်ကြမလဲနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး (၁၃) (Choosing Right Path and Real Politics) ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အရင်ကလည်း မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ အခုလည်း မကောင်းသေးပါဘူး။ နောက်လည်း ကောင်းဖို့ သိပ်မမြင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ကို တစ်ကယ် စိတ်ချယုံကြည်တဲ့ အတိုက်အခံဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင် အတိုက်အခံ အတုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အတိုက်အခံအတု မဟုတ်သူတွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ မမှန်ကန်တာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုစဉ်က လိမ်ခဲ့တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပေဒတွေ မတရားတာတွေကိုသာမက အခုလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်မှာလည်း နအဖက ညစ်နိုင်စရာတွေ ရှိနေမှာကို သိထားကြပါတယ်။ ဒါတင်မက ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်လို့ ဒီမိုကရေစီ ရမသွားဘူးဆိုတာကိုလည်း သိထားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံက စစ်ကျွန်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာ၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်လဲ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ဖို့ရာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိနေတယ် ဆိုတာကို ရှင်းလင်း ထောက်ပြဖို့ သိပ်လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့အားလုံး သိကြပါတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီနှင့်အတူ ထင်ရှားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေက နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေကို လက်မခံနိုင်ကြလို့ ပါတီဆက်လက် မှတ်ပုံမတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြပြီးပါပြီ။ ၄င်းတို့နှင့်အတူ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အင်အားစုတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး၊ ပြည်သူလူထု နိုးထရေး၊ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေး စသည်တို့ကို တစ်ဖွဲ့ချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ စုစည်းလို့ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ စဉ်းစားသင့်ပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အတိုက်အခံတွေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ကြိုးပမ်း ဟန့်တားနေတဲ့ကြားက ရွေးကောက်ပွဲကြီး ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို မြင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့် ဖြစ်သလို ဝင်ရောက်ကြရမဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာတွေအားလုံးမှာ လွှမ်းခြုံပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်လောက်အောင်၊ နိုင်ငံရေးအရ အရှိန်သြဇာကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နေရာအားလုံးမှာ ဝင်နိုင်လောက်အောင် လိုအပ်သော ငွေကြေး သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နအဖနှင့် စီးချင်းထိုးနိုင်စွမ်းလောက်အောင် နိုင်ငံအနှံ့မှာ လူထုထောက်ခံမှု ရရှိထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ မရှိဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အချို့ကလွဲရင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် တစည၊ ကြံ့ဖွတ်နှင့် ဦးတေဇတွေက လွတ်တော်တစ်ခုလုံးမှာ ဖျောက်ဆိပ်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအေးလွင်တို့၊ မင်္ဂလာဒုံ ဦးကြည်ဝင်းတို့၊ အလံနီလူထွက်တို့လို လူမျိုးတွေက နအဖ သနားလို့ ဟပေးမှ အမတ်ဖြစ်နိုင်မဲ့သူတွေမို့ လောလောဆယ် စာရင်းမဝင်သေးပါဘူး။ နအဖက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအတွင်း အကွဲအပြဲတွေဖြစ်အောင် ဆွဲအသုံးခံရသူတွေမို့ မလိုတဲ့နေ့ သူတို့ရှေ့က ဆရာ့ ဆရာကြီးများ လားရာအတိုင်း စုပ်ပြီးသား ကြံဖတ်လို ချနင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအမတ်တွေဘက်က လွန်ရော ကျွံရော ၂၀ရာခိုင်နှုံး သာသာလောက်သာ ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နအဖဘက်က စစ်တပ်ကိုယ်စားလည်နှင့် အလိုတော်ရိအမတ်တွေ ပေါင်းရင် ၈၀ရာခိုင်နှုံးလောက်တောင် ရှိသွားနိုင်တာမို့ ရှိသမျှ လွှတ်တော်တွေအားလုံးကို နအဖက ပက်ပက်စက်စက် အုပ်စည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်း နအဖကို တိုက်ရတာထက် ဟုတ်သည် ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည် ဖြစ်စေ၊ ပုသ်သင်ညိုလွှတ်တော်ကို အရောင်ပြ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဂုတ်ခွစီးထားမဲ့ မြွေအရေခွံလဲ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို တိုက်ရတာက အပုံကြီး ပိုခက်သွားနိုင်တာကို မြင်လောက်ကြပါတယ်။ သမိုင်းဆေးမခြောက်သေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဘဲ ပြန်ကြည့်ပါ။ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ နအဖနှင့် လက်တွဲလိုက်ကြတုန်းက သစ္စာဖေါက်တွေဆိုပြီး ဝိုင်းအဆဲခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုတခါ အဲဒီငြိမ်းတွေကိုဘဲ မဟာမိတ်ပြန်လုပ်ပြီး တိုက်ပွဲဆက်ရပြန်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဘဲ လွှတ်တော်တွင်း ဝင်ရောက်မဲ့ တိုင်းရင်းသားအပါအဝင် အတိုက်အခံတွေကို ခုနေခါ ရှုံ့ချနေကြပေမဲ့ နောင်တစ်ချိန်မှာ လက်မတွဲရဘူးလို့ ဘယ်သူ ကံသေကံမ ပြောနိုင်ပါသလဲ။ ရေတွင်းထဲကို တံတွေး မထွေးနှင့်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင်ပြန်သောက်ရ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ရုရှားစကားပုံလိုပေါ့ဗျာ။ အသုံးမကျ၊ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အကြောင်းကို လာမပြောနေပါနဲ့လို့ ဆိုချင်သူများ ရှိမှာပါ။ ကေသရာဇာ ခြင်္သေ့မင်းကြီးကလည်း မင်းက ငါ့ကို ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်မှာလည်းဆိုပြီး ကြွက်ကလေးကို အထင်သေးကာ လွှတ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ အသစ်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ လွှတ်တော်တွင်း တိုက်ပွဲဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး လက်နက်အပို တစ်ခုကို ကြွက်ကလေးသဘောနှင့်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အရံအတားထား ကိုင်စွဲ အသုံးချသွား သင့် မသင့်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရာ နိုင်ငံရေး သုခမိန်ကြီးဖြစ်ဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ သို့သော် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ရွေးကောက်ပွဲတွေ၊ လွှတ်တော်တွေကိစ္စ တွက်ချက်ဖို့က အချက်အလက်လည်း မစုံ၊ အချိန်လည်း စောသေးတာမို့ ခုနေခါ အကျယ် မဆွေးနွေးလိုသေးပါဘူး။ ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ စဉ်းစားသင့်ပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကို မစောင့်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အဓိက အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေက ပြည်တွင်း လှုပ်ယှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာအောင်၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ တိုးတက်များပြားလာအောင် လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနှင့် ရှင်သန်နေသရွေ့ လုပ်နေရမဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို CRPPထဲမှာပါတဲ့ ဦးဆောင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးက ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ကိုယ်စားပြုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးလိုလိုက ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြမှာ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာ နအဖတွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ ဝင်တိုးဖို့ မလွယ်တာမို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အသံက တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို လွှမ်းခြုံကိုယ်စားပြုမဲ့အသံက ခုတိုင်းဆို လွှတ်တော်တွေမှာ တိတ်ဆိပ်နေသွားမဲ့ဟန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကွက်လပ်ကို အစားဖြည့်ပေးနိုင်မဲ့ အင်အားစုတစ်ရပ်လိုနေပါတယ်။ ဒီကွက်လပ်ကို ဖြည့်သင့် မဖြည့်သင့်က နအဖတောင် ဝှက်ဖဲတွေ အကုန်မချပြသေးတာမို့ အခုဆွေးနွေးဖို့ စောလွန်း နေပါသေးတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်။ လူထုအကျိုးပြုနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ စုစည်းမှုကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့က မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီစုစည်းမှုကို လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ၊ ဇရပ်မှာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ၊ အိမ်တစ်အိမ်မှာ လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ၊ လှုပ်ယှားမှုပုံသဏ္ဍာန်တွေ ဖေါ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ ထုံးစံအတိုင်း နအဖက ရက်ရက်စက်စက် နှောင့်ယှက် ဖိနှိပ် ဟန့်တားမယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့အားလုံး သိကြတယ်။ ဒီအဟန့်အတားတွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားမလဲ။ ကျွမ်းကျင် ထက်မြက် ရဲရင့်တဲ့ တောင်တက်သမားတစ်ယောက်က မတ်စောက်တဲ့ ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခုကို အခက်အခဲတွေကြားက အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ ကျုပ်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီတောင်တက်သမားက မတော်တဆ ပြုတ်ကျခဲ့ရင် ကိုင်စွဲထားနိုင်တဲ့ အသက်ကယ်ကြိုးကို အရံအတား မထားဘဲ တက်ရောက်ရန် သင့် မသင့် စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီက ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘဲ လူမှုရေးတွေ၊ လူထုလှုပ်ယှားမှုတွေကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ နအဖက သူ့ရဲ့ တည်ဆဲ မတရား ဥပဒေတွေနှင့် နှိပ်ကွပ်လာရင် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ရှိထားခြင်းအားဖြင့် အမှီသဟဲပြု ခိုကိုးလို့ ရနိုင်တာကို သိရက်နှင့် ဒီအခွင့်အရေးကို လျစ်လျှူရှု လက်လွှတ်သင့်ပါသလား။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း လိုရမယ်ရဆိုပြီး အသက်ကယ်ပါတီတစ်ခုကို အင်အယ်လ်ဒီက ဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထား ၆ချက်မှာ (၁)က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံ၊ ရွှေဂုံတိုင်အတိုင်း ဆက်ရပ်နှင့် (၂)က တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လုံးဝ လက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အင်အယ်လ်ဒီ စီစီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူမ လက်ခံမယ် ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စီစီက ပါတီကို ဆက်လက်မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနီးကပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသူတွေ တညီတညွတ်တည်း ပြောကြတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုက “ဒေါ်စုက ညွှန်ကြားချက် လာလာတောင်းတာကို မကြိုက်ဖူး။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ လုပ်သင့်တာကို စဉ်းစားပြီး ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ကြဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းတတ်တယ်”လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စီစီအစည်းအဝေးအပြီးမှာ ဦးဝင်းတင်က အောက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ပါတီအနေနှင့် ခြေပြတ်မယ်။ လက်ပြတ်မယ်။ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းပြတ်မယ်။ ခြေပြတ်တာ၊ လက်ပြတ်တာ အတုလုပ်ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်။ ခေါင်းပြတ်သွားရင်တော့ ခေါင်းအတုလုပ်လို့ မရဘူး။ ခြေတု၊ လက်တုဆိုတာ လိုအပ်ရင် ပါတီအသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံတည်ထောင်ဖို့လို့ဘဲ အဓိပ္ပါယ် ကောက်နိုင်ပါတယ်။ မေလ (၇)ရက်၊ ၂၀၁၀ သည် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်သဘောကတော့ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဦးသန်းညွန့်တို့ ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအဖြစ် အချိန်မီ မှတ်ပုံတင်သင့်တယ်။ ဒီလိုမှတ်ပုံတင်နိုင်အောင်လည်း ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်တို့က နားလည်မှု ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရေးပါတီသည် အရေးကြုံရင် အသုံးတဲ့ကောင်း တဲ့သွားနိုင်တဲ့ အသက်ကယ်ပါတီ(Lifeboat Party) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်များက မလိုဘူးထင်တဲ့နေ့ အချိန်မရွေး ဖျက်သိမ်းပစ်လို့ ရပါတယ်။ သို့သော် လိုမယ်ထင်မှ ဖွဲ့ချင်တိုင်း ထဖွဲ့လို့ မရတာမို့ လိုရ မယ်ရ မဖြစ်မနေ ကြိုဖွဲ့ထားသင့်တဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရင် နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံပေးရမှာတို့၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပေးရမှာတို့ကို သိပ်ရေးကြီး ခွင်ကျယ် မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတစ်ဦးက “အင်အယ်လ်ဒီက ပါတီမှတ်ပုံတင်ရင် ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်”ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ် အသံလွှင့်နေတာကို ကြားမိပါတယ်။ ဒီပြောလုံးမျိုးက စကားရည်လုပွဲတွေမှာ အကျကောက် နောက်ကောက်ချ ပြောတတ်တဲ့ ပြောလုံးမျိုးတွေပါ။ လူသန်း၅၀ကျော်ရဲ့ ဘဝကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရမဲ့ ရှုတ်ထွေးပွေလီတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကို တစ်ပွဲတိုးနှင့် အနိုင်ပိုင်းလို့ ရတတ်တဲ့ စကားရည်လုပွဲ တစ်ခုလို မမြင်သင့်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်အောက်ခံအဖြစ်ထားရမလားဆိုပြီး အပစ်ပြောသူတွေကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက “စစ်တပ်ကို လွတ်လပ်ရေး မရသေးခင် ရှိတဲ့အစိုးရရဲ့ လက်အောက်မှာ မထားရင် သူပုန်တပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့”လို့ တုန့်ပြန်ဖူးပါတယ်။ ဂန္ဒီခမ်းမကြေညာချက် မထုတ်ပြန်ခင် နဝတက ကပ်ပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ ၁/၉၀ကို အင်အယ်လ်ဒီအပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတွေ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက် အင်အယ်လ်ဒီအပါအဝင် အတိုက်အခံတွေ အားလုံးကဘဲ ၁/၉၀ကို ပြန်တောင်းပါတယ်။ နအဖက မပေးတော့ပါဘူး။ ၁/၉၀ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လက်တွေ့ အခြေအနေတွေအရ ၁/၉၀ကို ပြန်တောင်းရတဲ့အတွက် ရှုံ့ချီ နှပ်ချီ၊ မှေက်ချီ၊ လှန်ချီ လုပ်သူများအဖြစ် စကားရည်လုပွဲလုပ်ပြီး စကားနာထိုးမယ်ဆိုရင် အင်မတန် အချက်ကျပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် နိုင်ငံရေးဆိုတာ စကားရည်လုပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်အယ်လ်ဒီ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ထုတ်ချင်တဲ့ ဥပဒေထုတ်၊ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ်မလေးစားတတ်တဲ့ နအဖကို ရင်ဆိုင်ဖို့ရန် သူထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေတွေကိုဘဲ ပြန်အသုံးချသင့်ရင် အသုံးချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေခွေးကို မြေခွေးအမြီးနှင့် ချည်တန် ချည်ရပါမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်မဲ့ အင်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေဟာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ သူ့ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသက်ကယ်ပါတီရဲ့ အလံအောက်မှာ ရုံးခန်းဖွင့်နိုင်၊ ဆက်သွယ်၊ ပြန်ကြားနိုင်၊ စုစည်းနိုင်၊ စည်းဝေးနိုင်ကြမဲ့ အခွင့်အရေးကို တမင် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံဖို့ သင့် မသင့် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြဖို့ လိုပါပြီ။ လွှတ်တော်တွင်း တိုက်ပွဲကို ရင်ဆိုင်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အသက်ကယ် ပါတီတစ်ရပ်အနေနှင့် ရပ်တည်ထားဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို လွှတ်တော်တွင်းမှာ လွှတ်တော်ပ အင်အားစုတွေနှင့် ဟန်ချက်ညီညီ လက်တွဲပြင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရေးအတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါတီမထောင်ဘဲ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံအနှံ့ လုပ်ဆောင်ကြမဲ့ အင်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေကို အကာအကွယ်ပေး ထီးရိပ်မိုးပေးဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ ခြေတု လက်တု ပါတီတစ်ရပ်တည်ထောင်လိုက်ခြင်းကို ပြည်သူလူထုက အပြည့်အဝ နားလည်မှုပေး ထောက်ခံကြမယ်လို့ ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ စဉ်းစားသင့်ပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကို မစောင့်။ လွတ်တဲ့ငါး မကြီးစေချင်ပါ။ အောင်ထီ ဧပြီလ (၂၇)၊ ၂၀၁၀ Summary only...
27 April 2010 http://allburmamonksalliance.com/?p=5065
မတရားမှု ဖိနှိပ်မှု ရှိနေသမျှ လူထုက အုံကြွအန်တုနေမှာ...